Ngoku abantu abayikumangaliswa nomkhiqizo onjenge-peanut halva. Oku kudla okuthakazelisayo kubhekisela kwisidlo esempuma, kwaye malunga neMpuma, bayazi kakhulu ngokupheka. Xa ulungisa izitya, umntu waseMpumalanga ubaphatha ngokuxhalabisa, ebeka umphefumlo wakhe kwimveliso nganye, ngelixa engalibali ngeenzuzo. Kule ncwadi, sifuna ukuqwalasela ukuba i-peanut halva yintoni: inzuzo okanye ingozi ibangelwa umntu ekusebenziseni le mveliso.
Iindidi ezahlukeneyo ze-halva.
Akukho mveliso inokuziqhayisa ngeentlobo ezahlukeneyo zeentlobo, ezifana ne-halva. Kwenzeka ngeesame, imbewu yepoppy, iinqabileyo, izithelo ezomileyo, ushokoledi, i-classic kwaye, ngokuqinisekileyo, i-peanut. I-Halva ngumkhiqizo onokuzanywa ngawo. Nabani na ofuna ekhaya angongeza ukugxotha kuyo ngokutsho komntu. Abantu abaxhasa ubunzima babo, xa bethenga, kufuneka ufunde ngokucophelela ukubunjwa kwalo mveliso. Ngombuzo wokuba ingaba i-halva iyingozi okanye ifake inzuzo, siya kuqonda ngokubanzi.
Halva: izibonelelo, iimpawu zokuphilisa.
Okokuqala, siya kuqonda ukuba ziphi iimandla ze-peanut halva, kunye nazo iimpawu ezintle. Ngaba kulungele ukuchitha imali ukuyithenga? Ukuze senze oku, siya kuqhelana nenkqubo yokuvelisa.
Ukwenza i-halva, imbewu yelanga yenziwa rhoqo, ihlanjululwe ngokucokisekileyo, ize ixutywe kwaye ixutywe kunye nesiraphu kunye nezinye izithako, ngenxa yokuba isakhi esinobunzima sakhiwe, esithunyelwa kwisiqandisini sokubamba. Le ndlela yindlela elula yokuchazela indlela ukulungiselela ukupheka kwaseMpumalanga kulungiselelwa ngayo.
Imbewu iyona nto ibaluleke kakhulu kwi-halva. Iinzuzo zabo kumzimba zikhulu, kuba ziqukethe ezininzi i-micronutrients kunye namavithamini. Nazi ezinye zazo: i-zinc, isinyithi, i-magnesium, i-phosphorus. Kufuneka kugqitywe ukuba ngoncedo lwe-halva, umntu unokunyanga i-anemia, ukungabikho kwesinyithi, okukhokelela ekudleni kwegazi. I-Halva ibuyisela kwakhona inkqubo yokutya, xa isetyenziselwa ukumodareyitha.
Imbewu ye-sunflower isityebi kwi-acids polyunsaturated, ekhusela ukuguga kweeseli. Kwaye ukuba uhanjelwe ngcamango yokubuyisela ubuhle nobutsha, ngaphambili iyakunceda kule nto. Mhlawumbi, ngenxa yokusebenzisa i-halva, intombazana yaseMpumalanga idume ngobuhle bayo.
Abathanda umdlalo nabo banokukholisa i-halva. Iqukethe inani elikhulu leprotheni, elingafaniswa nenyama. Ekubanjwe i-halva, iiprotheni ezisebenzayo zinceda ukufumana ubunzima be-muscle, ngelixa zingakhathali.
I-Peanut, eyinxalenye yemveliso, ikhulisa izakhiwo ezincedo "ngamanye amaxesha". Amantongom ayenceda kakhulu umzimba - ayomeleza iindonga zemivenge yegazi, asebenze umsebenzi wengqondo, azalise umzimba wethu ngezinto ezinobunzima ukuba zifumaneke kwimveliso eqhelekileyo. Enye into encinane ye-halva iqulethe malunga nesiqingatha sezinto zetafile zexesha. Umama okhulelwe, naye, kuya kuba luncedo ngenxa yomxholo we-folic acid.
Ebusika, xa uxinezelekile, i-halva eneepanki zingakwazi ukujamelana nayo ngokufanelekileyo. Ukuba iilekese zitshintshwa i-halva, ngoko kuya kunceda ukufudumala nokuvuyisa. Ukuqokelela umntwana wakho esikolweni kwaye ubeke esikhundleni seentlobo ezahlukeneyo ze-halva, qiniseka ukuba akayi kulamba ixesha elide kwaye uya kusebenza yonke imini. Kwakhona, i-halva iluncedo kubantu abanobunzima kwi-sex sector.
Mngcipheko ekusebenziseni kwamanqatha i-halva.
Ukusetyenziswa kwe-halva kukhulu, kodwa kungabangela ingozi. Ngelishwa, akubona bonke abathengisi abanenkathalo ngempilo yabathengi. Nangona i-halva yemvelo ene-sunflower, i-sesame, i-pistachio okanye i-peanut, oku akuthethi ukuba izithako azilimazi umntu.
Ngenxa yomxholo ophezulu we-caloric, i-halva ayinconywa kubantu ababukele ubunzima babo, kunye nabantu abaphethwe zizifo zesigca esisisu. Ukusetyenziswa kwayo kunokubangela ingozi enkulu, emva koko unyango olufunekayo.
Amanqatha ayaphikiswa kubantu abanesifo sikashukela. Ukongezelela, abantwana abaneempembelelo ezinobungcipheko, nabo, abanakuyidla i-halva.
I-Halva ingasetyenziselwa njenge-dessert, kodwa ukuba unesidlo esinomdla kakhulu okanye isidlo sakusihlwa, kufuneka ubaleke ukuyisebenzisa. Ixesha elihle kakhulu kuye likusasa. Xa udlile i-peanut halva yokutya kwasekuseni, uya kuzinikela amandla onke loo mini.
Ubulumko besikhokelo okanye imbono yokutya
Ii-almond: izakhiwo eziwuncedo
Indlela yokunika ivolumu ezinwele ezincinci
I-Tarot - inkolelo ekutshekeni kwimaphu